Faah faahin:- Weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday saldhiga ciidanka Jabuuti ee B/weyne – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday saldhiga ciidanka Jabuuti ee B/weyne
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday xarun ay ciidanka Jabuuti ee AMISOM ku leeyihiin xaafadda Howl-wadaag ee galbeedka magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Weerarkaasi oo ahaa mid aad u xoogan ayaa laga wada maqlay dhamaan xaafadaha ku yaala magaalada B/weyne, waxaana weerarkaasi loo adeegsaday gaari noociisu yahay kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa.
Gaarigaasi ayaa la sheegay in lagu dhuftay afaafka hore ee saldhiga ciidanka Jabuuti ee ku yaala galbeedka magaalada B/weyne, kaas oo sidoo kale ku dhaw goob suuq ah oo laga adeegto.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku geeriyootay ilaa 5 qof oo isugu jira dad rayid ah oo ka adeeganaayay suuqaasi iyo askar tirsan ciidanka Jabuuti, iyadoona sidoo kale ay tiro intaasi ka badan ku dhaawacantay.
Weerarkaasi kadib, waxaa goobta laga maqlay rasaas badan oo la sheegay inay ridayeen ciidanka weerarka lagu qaaday ee Jabuuti, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo kale oo gurmad ah oo isugu jira Jabuutiyaan iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya.
Ciidankaasi ayaa kadib xiray dhamaan wadooyinka soo gala xarunta ay ku sugnaayeen ciidanka Jabuuti ee weerarka lagu qaaday, waxayna halkaasi ka bilaabeen baaritaano culus.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa islamarkiiba sheegatay mas’uuliyada weerarkaasi ka dhacay B/weyne, waxayna sheegeen in weerarkaas ay ku dileen ilaa 17 askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ee AMISOM.
Ilaa iyo haatan ma jirto ilo madax banaan oo xaqiijinaya tiradda rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi, marka laga soo reebo sheegashada Al-shabaab iyo inta la hubo inay waxyeelo kasoo gaartay.